Home कला पललाई हटाएर पुष्प राखियो रेड वाइनमा
काठमाडौं । अभिनेता पुष्प खडका र अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले यसअघि दुई वटा चलचित्रमा काम गरिसकेका थिए । फेरि यी जोडी नयाँ चलचित्रमा अनुबन्धित भएका छन् । पुष्प र साम्राज्ञीले यसअघि सँगै काम गरेको दुई वटा चलचित्र मंगलम् र मारुनी हो । जसमध्ये मंगलम्ले निकै राम्रो व्यापार गरेको थियो ।
यसपटक अभिनेत्री साम्राज्ञीसँग अभिनेता पुष्प नयाँ चलचित्र रेड वाइनमा जोडिन पुगेका हुन् । यो चलचित्रबाट अर्का अभिनेत्री पल शाह निकालिएपछि उनको ठाउँमा पुष्प अनुबन्धित भएका हुन् ।
यतिबेला नयाँ फिल्म कृष्णलीलाको छायांकनमा पुष्प सप्तकोसी क्षेत्रमा छन् । सो चलचित्रको छायांकनमा कोसी जानुअघि पुष्प नयाँ फिल्म रेड वाइनमा अनुबन्धित भएका हुन् ।
चलचित्र रेड वाइन नेपाल र अमेरिकामा छायांकन हुने तयारी भईरहेको छ । पुष्पले चलचित्र कृष्णलीलाको छायांकन सम्पन्न गरेपछि रेड वाइनको काम सुरु गर्नेछन् । यो चलचित्रबाट अभिनेता पल शाह बाहिरिए र पुष्प जोडिएपछि उनले फिल्मको तयारी अहिलेबाटै सुरु गर्न थालेका छन् ।
रमेश एमके पौडेलले यो चलचित्रको निर्देशन गर्ने भएका छन् । अमेरिकामा रहेका निर्देशक पौडलललाई पलका केही दबाब मन नपरेपछि उनको ठाउँमा अर्का नायक राख्न बाध्य भएको बताइएको छ । अभिनेता पलले यो चलचित्रको कथावस्तु, कलाकार र नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । योसहित अन्य विभिन्न कारणले गर्दा पललाई फिल्मबाट हटाएर पुष्पलाई लिनुपरेको निर्माण पक्षले जनाएको छ ।
यो चलचित्रमा सुरुमा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मीलाई र त्यसपछ अभिनेता पल शाहलाई अनुबन्धित गरिएको थियो । फिल्ममा आफ्नो भन्दा साम्राज्ञीको भूमिका प्रभावशाली भएको महसुस अभिनेता पलले गरेका थिए । त्यसैले कथावस्तु परिवर्तनका लागि उनले दबाब दिएका हुन् । तर अन्य कारणले गर्दा पलको ठाउँमा पुष्पलाई लिनुपरेको निर्देशक पौडलले स्पष्ट पारेका छन् । फिल्मको २० प्रतिशत छायांकन काठमाडौं र ८० प्रतिशत अमेरिकामा हुनेछ । फिल्ममा सन्दीप क्षत्रीको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ ।
विवेक रेग्मी - April 16, 2020
इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष बिष्णु चौधरीको निधन भएको छ । राती १२ः३० बजे उनको निधन भएको हो...
Breaking News नारायण ढुङ्गाना - April 8, 2020
काठमाडौँ । खुला सिमानाका कारण मुलुकको दक्षिणी नाकाबाट कोभिड–१९ को उच्च जोखिम बढेपछि सरकारले दक्षिणी सीमा नाकामा थप कडाइ गरेको...
प्रदेश २ सुजीतकुमार झा - September 2, 2020
अर्थ सुजीतकुमार झा - October 12, 2020
काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजागारीबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगारमा लगाउन शुरुआती पूँजी उपलब्ध गराउने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८...
Editor-Picks श्रीकृष्ण सिग्देल - April 1, 2020